Fanazavan-teny | EGW Writings
Fanompoana KristianinaHery MifanandrinaHafatra Ho An'ny TanoraIlay Fanantenana LehibeIlay Fitiavana MandresyNy Dia Ho Eo Amin’ I KristyPatriarka sy mpaminanyTorolalana Ho Amin'ny Fahaiza-Mitantana
Ny filazalazana ny mombamomba ny mpanoratra Ellen Gould White, 1827-1915Teny MialohaToko 1 - Ny Fahalavoan’ I SatanaToko 2 - Ny Fahalavoan’ Ny OlonaToko 3 - Drafi-PanavotanaToko 4 - Ny Fiavian’ny Jesosy VoalohanyToko 5 - Ny Asan’ I KristyToko 6 - Ny Fiovan-TarehyToko 7 - Ny Namadihana An’i KristyToko 8 - Ny Fitsarana An’i JesosyToko 9 - Ny Nanomboana An’i JesosyToko 10 - Ny Nitsanganan’i Kristy Tamin’ny MatyToko 11 - Ny Fiakaran’i JesosyToko 12 - Ireo Mpianatr’i KristyToko 13 - Ny Fahafatesan’i StefanaToko 14 - Ny Fiovam-Pon’ I SaolyToko 15 - Nanapa-Kevitra Ny Hamono An’i Paoly Ny JiosyToko 16 - Namangy An’ny Jerosalema I PaolyToko 17 - Ilay Fihemorana LehibeToko 18 - Ny Zava-Miafin’ny Tsi-Fankatoavan-DalanaToko 19 - Ny Fahafatesana Tsy Fijaliana Mandrakizay.Toko 20 - Ny FanavaozanaToko 21 - Ny Firaisan’ Ny Fiangonana Amin’ Izao Tontolo IzaoToko 22 - William MillerToko 23 - Ilay Hafatr’ Ilay Anjely VoalohanyToko 24 - Ilay Hafatry Ny Anjely FaharoaToko 25 - Voaseho An-Tsary Ny Fihetsehana AdvantistaToko 26 - Fanehoana An-Tsary HafaToko 27 - Ny Fitoerana MasinaToko 28 - Ilay Hafatry Ny Anjely FahateloToko 29 - Ilay Fanorenana MafyToko 30 - Ny Filalaovana Angatra.Toko 31 - Ny Fieremana (Na Fahihirana)Toko 32 - Ny FikororonaToko 33 - Ny Fahotan’ Ny BabylonaToko 34 - Ilay Antso AvoToko 35 - Nifarana Ilay Hafatra FahateloToko 36 - Ny Andro Fahorian ‘ I JakobaToko 37 - Ny Fanafahana Ireo Olo-MasinaToko 38 - Ny Valisoan’ Ireo MasinaToko 39 - Misaona Ny Tany (Nidiran-Doza Ny Tany)Toko 40 - Ny Fitsanganana FaharoaToko 41 - Ny Fahafatesana Faharoa
Ny filazalazana ny mombamomba ny mpanoratra Ellen Gould White, 1827-1915
Toko 1 - Ny Fahalavoan’ I Satana
Toko 2 - Ny Fahalavoan’ Ny Olona
Toko 3 - Drafi-Panavotana
Toko 4 - Ny Fiavian’ny Jesosy Voalohany
Toko 5 - Ny Asan’ I Kristy
Toko 6 - Ny Fiovan-Tarehy
Toko 7 - Ny Namadihana An’i Kristy
Toko 8 - Ny Fitsarana An’i Jesosy
Toko 9 - Ny Nanomboana An’i Jesosy
Toko 10 - Ny Nitsanganan’i Kristy Tamin’ny Maty
Toko 11 - Ny Fiakaran’i Jesosy
Toko 12 - Ireo Mpianatr’i Kristy
Toko 13 - Ny Fahafatesan’i Stefana
Toko 14 - Ny Fiovam-Pon’ I Saoly
Toko 15 - Nanapa-Kevitra Ny Hamono An’i Paoly Ny Jiosy
Toko 16 - Namangy An’ny Jerosalema I Paoly
Toko 17 - Ilay Fihemorana Lehibe
Toko 18 - Ny Zava-Miafin’ny Tsi-Fankatoavan-Dalana
Toko 19 - Ny Fahafatesana Tsy Fijaliana Mandrakizay.
Toko 20 - Ny Fanavaozana
Toko 21 - Ny Firaisan’ Ny Fiangonana Amin’ Izao Tontolo Izao
Toko 22 - William Miller
Toko 23 - Ilay Hafatr’ Ilay Anjely Voalohany
Toko 24 - Ilay Hafatry Ny Anjely Faharoa
Toko 25 - Voaseho An-Tsary Ny Fihetsehana Advantista
Toko 26 - Fanehoana An-Tsary Hafa
Toko 27 - Ny Fitoerana Masina
Toko 28 - Ilay Hafatry Ny Anjely Fahatelo
Toko 29 - Ilay Fanorenana Mafy
Toko 30 - Ny Filalaovana Angatra.
Toko 31 - Ny Fieremana (Na Fahihirana)
Toko 32 - Ny Fikororona
Toko 33 - Ny Fahotan’ Ny Babylona
Toko 34 - Ilay Antso Avo
Toko 35 - Nifarana Ilay Hafatra Fahatelo
Toko 36 - Ny Andro Fahorian ‘ I Jakoba
Toko 37 - Ny Fanafahana Ireo Olo-Masina
Toko 38 - Ny Valisoan’ Ireo Masina
Toko 39 - Misaona Ny Tany (Nidiran-Doza Ny Tany)
Toko 40 - Ny Fitsanganana Faharoa
Toko 41 - Ny Fahafatesana Faharoa
TENY HEVINY Ny ahitana izany voalohany
Jesosy Kristy Iray ami’ny ireo persona 3, Izay Andriamanitra. Izy No nanao ny zavatra rehetra Maneran-tany sy izao tontolo izao Nateraka toy ny olombelona Izy teo ho eo amin’ny 2000 taona lasa izay, novonoina izy tamin’ny faha 33 taonany, natsangana tamin’ny maty, ary miasa any an-danitra amin’izao fotoana izao mba ho famonjena antsika Hiverina eto amin’ity tany ity tsy ho ela Izy, ary homena azy ny fanapahana ny Zavatra rehetra manerana izao tontolo izao Mandrakizay, mandrakizay. Lohateny
Satana I Devoly. Izy no rain’ny ratsy rehetra. Noforinina ho tsara indrindra , zavamananaina tanteraka noho ny hafa rehetra izy, fa nanapakevitra ny hikomy kosa izy. Ankehitriny, dia manohy ny asa ratsiny hatrany izy nefa ho avy ny fotoana izay handringanan’Adriamanitra azy. Lohateny
Tompo Jesosy Kristy Hitako
Nasehoa ahy Andriamanitra Ray
Rehefa ny mpanoratra, Ellen White nahita io fahitana io, ny anjely Izay teo akaikiny no nilaza zavatra taminy Naneho zavatra taminy. Nanoratra izy ary izay hitan’ny masony. Toko 1
Andriamanitra Ny Ray, zanaka (Jesosy Kristy) ary
Ny Fanahy Masina. Ireo 3 rehetra ireo dia
Andriamanitra Toko 1
Zanak’Andriamanitra Jesosy Kristy Toko 1
Tenin’Andriamanitra 1°) Izay tenenin’Andriamanitra
2°) Ny Baiboly Toko 2
Fanavotana avotra Tany am-piandohana, ny olombelona dia fananan’Andriamanitra, fa Satria nanota ny razambentsika dia isika rehetra dia lasa an’I Satana ankehitriny. Ny anaran’I Jesosy Kristy dia miasa mba Hanavotana antsika amin’I Satana Toko 3
Ny anjely Ilay anjely izay nirahina mba Ho eo anilan’I Ellen White Rehefa
Nahita an’io fahitana io izy Toko 3
Ny fiaviana Ny fahatongavan’I Jesosy ampahibemaso eto an-tany. Ny voalohany
Dia tamin’ny 2000 taona lasa izay ary
Ny faharoa dia efa ho avy tsy ho ela Toko 4
Zanak’ondrin’Andriamanitra Jesosy Kristy Toko 4
Jaona mpanao batisa Mpaminany rahalahin’I Jesosy. Izy no niantso ho amin’ny fibebahana sy ny batisa Toko 4
Batisa Fanitrihana ny vatana iray manontolo ao ambanin’ny fanambonin’ny rano mba ho tonga Kristianina Toko 4
Elia Mpaminany iray nakarina velona tany an-danitra ary tsy nandalo fahafatesana Toko 4
Fanatitra Ou Sorona Fanomezana biby ho an’Andriamanitra ary koa, Jesosy Kristy, ny tenany mihitsy Toko 5
Fireneny, Vahoakan’Andriamanitra 1°) Fahiny dia ny vahoakan’Israely sy Jodia
2°) Ankehitriny, izay rehetra mino an’i Jesosy ary manao ny sitrapony Toko 17
Mikaela Lehiben’ireo anjely rehetra any an-danitra Toko 16
Rota Hazo izay maniry any Afovoany Atsinanana. Ny raviny dia ampiasaina ho fanafody Toko 7
Rahalahy, rahavavy Izay rehetra mino an’I Jesosy ary manao ny sitrapony Toko 7
Sabata Derao Andriamanitra!
Andro hitsaharana izay manomboka ny Zoma milentimasoandro ka mifarana ny Sabotsy mileti-masoandro. Jereo Genesisy 2:2-3 Toko 9
Hafatra Teny izay avy amin’Andriamanitra. Ary koa ny fihetsiketsehana ho fanapariahana izany teny izany Toko 10
Fiakarana Fiakarana an-danitra. Tsy midika hoe: fahafatesana Toko 11
Apostoly Olona izay mitory ny filazantsara anatin’ny fotoana feno toy ny asany. Entina ilazana indrindra koa ireo mpianatr’I Jesosy sy I Paoly Toko 12
Ny zanak’olona Jesosy Kristy Toko 13
Jentelisa Ireo hafa rehetra ankoatrin’ny Jiosy Toko 14
Paoly Talohan’ny niovany fo, dia fantatra tamin’ny anarana Saoly izy. Jereo Asa 13:9 Toko 15
1843, 1844 Ny fiavian’I Jesosy fanindroany sy ny fiafaran’izao tontolo izao dia noheverina ho tonga tamin’ny fiafaran’io taona io. Kanefa ny fotoana arapaminanian’I Daniela 8:14 no tanteraka tamin’io faran’ny taona io Toko 23
Mpiandry ondry 1°) Ireo mpitondra fivavahana. Ireo Pasitora sy Piretra
2°) Jesosy Kristy Toko 23
Ireo Masina Ireo izay tia an’Andriamanitra amin’ny fo tokoa ary manaraka izay zavatra lazainy hatao Toko 24
Fioerana Masina Anaran’ilay toerana any andanitra izay hiasan’I Jesosy, ankehitrio, mba ho famonjena antsika. Misy kianja izy io, Fitoerana Masina (trano voalohany) ary Fitoerana Masina indrindra (trano faharoa). Ilay nataon’I Mosesy fahiny dia nalaina tahaka tamin’ilay any an-danitra. Izay antsoina koa hoe “Tabernakely” sy “tempoly”. Toko 25
Fampihavanana ou fanavotana Jesosy dia manatanteraka io asa io amin’ny fampihavavana ou fanamarinana ny olona amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fahamendrehan’ny rany. Toko 25
Ziona 1°) Anarana iray ho an’ilay toerana any an-danitra ankehitriny
2°) Anaran’ireo vondron’olona izay manaraka an’Andriamanitra
Jerosalema vaovao Anaran’ilay toerana any andanitra ankehitriny, tranon’Andriamanitra sy ireo anjely. Io toerana io dia hampidinina ety ambonin’ity tany ity ary ho eto mandrakizay Toko 27
Kerobima Laharana voalohany amin’ny anjely Toko 27
Fanelanelanana Jesosy dia mijoro eo anelanelan’ny mpanota voaheloka sy Andriamanitra Ray tsitoha. Manatanteraka io asa io Jesosy mba ho famonjena antsika toy ny “mpanelanelana” Toko 27
Bibidia Anarana ho an’ireo vondron’olona maro izay manohitra an’Andriamanitra. Jereo Apokalipsy 13 Toko 28
Jehovah Anarana iray iantsoana ilay Andriamanitra Ray Toko 28
Kanana Anaran’ilay tany izay nampanantenaina ho an’ny Israely. Izay naneho an-tsary ny lanitra. Jereo Genesisy 12:5 Toko 28
Andron’ny pantekosta Iray amin’ireo fety izay nomen’Andriamanitra ny Israely. Jereo Levitikosy 23:15-16 & Asa Toko 2 Toko 29
Advantista Anaran’ireo olona izay mino fa ho avy indray eto an-tany I Jesosy. Ary koa, anaran’ireo vondron’olona ireo Toko 29
Laodikia Fiangonana farany amin’ny lisitr’ireo fiangonana fito ao amin’ny Apokalypsy Toko 2 & 3. Io antoko io dia mihevitra fa manna-karena ary tsy mila fanampiana ara-panahy, kanjo, mahantra sy ory izy ireo. Toko 32
Ranonorana farany Ny Fanahy Masina dia mirotsaka amin’ny fahafenony mba hanomana ny olona ho an’I Jesosy, izany dia mialoha indrindra ny fiaviany indray eto an-tany. Jereo Joela 2:23 & Asa 3:19 Toko 32
Jobily Taonan’ny fahafahana. Isaky ny 50 taona ny Israely dia mamerina ny zavara rehetra amin’ny tompony voalohany. Ny fambolena koa, dia tsy tanterahina amin’io taona io. Jereo Levitikosy 25:10 Toko 37